Isixazululo - Shenzhen Joint Technology Co., Ltd
amabhizinisi abaningi ngcono ukuphathwa kwabo imikhumbi kanye okunengqondo uhlele imoto dispatchingwith Fleet Management System, hhayi kuphela kahle uqinisekisa ukuphepha izimoto nezinto eziyigugu, kodwa futhi kunciphisa izindleko.
Kusho Of Parctice
Thina ehlukanisa Fleet Management waba izingxenye ezintathu: abantu, izimoto kanye cargos. I "Abantu" lapha lihlanganisa abashayeli passengers.We kungaba kahle iqondise ukusebenza ukushayela kanye nesikhathi ukushayela abashayeli nge inhlanganisela ngempumelelo RFID ubuchwepheshe, ikhamera bese GPS esibulalayo. Futhi singakwazi kahle ukuqinisekisa ukuphepha abashayeli by izexwayiso kanye alamu eziphuthumayo.
Fleet Management: Asikwazi ukulandelela informations ehlukahlukene mayelana izimoto ngesikhathi sangempela, futhi unikeze namaklayenti olunembile nombuzo inkonzo location.The izimoto izimoto 'kungenziwa kahle kokuthunyelwa ngemva kokuyazi kahle ukunyakaza khona izimoto. Futhi singakwazi ngokucacile bazi isimo nokugcinwa izimoto. Singenza umzila-okuhlela izimoto kusengaphambili, kanye ukwenza enemininingwane ukuphathwa zokuthutha uhlelo.
Ukuphathwa kwefa: Gada izimo egijima lwefa mobile endleleni ngobuchwepheshe ikhamera, umnyango kazibuthe lokungeniswa ubuchwepheshe, ibha-ikhodi ukuskena ubuchwepheshe, RFIDtechnology, ubuchwepheshe GPS, wireless ukuthumela ubuchwepheshe, njll, ukuze athole ukuphathwa ekwethulweni ngempumelelo kwezinsiza, okuyinto ungagwema ngempumelelo ukuthi izici ezibaluleke ebiwe, siphangiwe sase silahlekile.
ukusebenza ngekhono kanye nenzuzo
yemfanelo kanye nezingozi
platform 1.The ukuphathwa isekela ukuqapha 10 languages2.Real esigcwele futhi zomlando kokulandela review3.Route ukuhlela / zesifunda ukuhlela 4.Vehicles ezisebenza ibika alamu 5.Real esigcwele futhi imibiko alamu.
Ukufaniswa Kudingekile Hardware Imikhiqizo
Yekuchumana ukunquma izinga, lokuhlushwa ephonsa brand
Isixazululo Logistics Ezokuthutha Fleet Management
Isixazululo School Bus Fleet Management
Isixazululo Thumela Ezokuthutha Fleet Management
Isixazululo esiqandisini Ezokuthutha Fleet Management
Isixazululo Taxi Fleet Management